Soo dejisan VirtualDub 1.10.4 – Vessoft
WindowsMultimediaDiiwaanka shaashada,Tifaftirayaasha warbaahintaVirtualDub
Qaybaha: Diiwaanka shaashada, Tifaftirayaasha warbaahinta
Bogga rasmiga ah: VirtualDub
VirtualDub – software ah ee qabashada screen iyo ka arrinsashada video files. Software wuxuu kuu ogol yahay inaad la qabsato ee dhalaalka oo ka duwan of video, wax ka beddelo ama tirtirto kuwan raadkaygay ku dhawaaqa, beddelid video in qaabab kale, resize files video iwm VirtualDub ka kooban qalab ay u jaray qayb ka mid ah la doortay ee video ah, xaalkaa video ah oo lagu dahaadho effects kala duwan. Software wuxuu kuu ogol yahay in la kordhiyo shaqeynta ee Dufcaddii-ka arrinsashada files isticmaalaya xiriir ah video diirada ka soo saarayaasha kale. VirtualDub gubtay, khayraadka nidaamka ugu yar oo fudud ah si ay u isticmaalaan interface.
Itusi files audio iyo video
Set A ee saameynta kala duwan
Connection of dheeraad ah video shaandheeyaa
Soo dejisan VirtualDub
Faallo ku saabsan VirtualDub
VirtualDub Xirfadaha la xiriira